HOMTOM HT6 သည် Doogee terminal အသစ်ဖြစ်ပြီး ၁၁၂၅ ယူရိုသာ ၆၂၅၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည် Androidsis
Francisco Ruiz | | ဘက်ထရီ, မိုဘိုင်း, လဲ tutorial
ကျနော်တို့ရုံ၏အရေးအသား၌ရတယ် Androidsis ပါ, Doogee စီမံခန့်ခွဲမှုမှပေးပို့သောတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် Doogee အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စတင်ခြင်းကိုအသိပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည် HOMTOM နှင့်ခေါ်အသစ်တစ်ခုကို terminal နှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မယ် HOMTOM HT6 တစ်ဦးနှင့်အတူ 6250 mAh ကြီးမားသောဘက်ထရီ ပြီးတော့ဘာကတိလဲ အလယ်အလတ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ terminal ကို၏ခုနစ်ရက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အတူတူသို့မဟုတ်၏ အထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုမှုကိုသုံးရက် usb cable နှင့် charger ကိုသုံးစရာမလိုပါ။
အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ terminal ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်တင်နိုင်သောအကောင်းဆုံး Android mid-range ၏အဆင့်ဖြစ်သည်။ HD resolution ဖြင့် ၅.၅ လက်မအရွယ် screen သည် 5,5 x 1280 pixels ဖြစ်သည်, အန်းဒရွိုက် 5.1 Lollipop Mediatek ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် Processor တစ်ခုလုံးကထိန်းချုပ်သည် MTK6735 အများဆုံးနာရီအမြန်နှုန်း 64ghz နှင့် 1-bit quad-core နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည် မာလီ T720 GPU ကိုအားလုံး Ram မှတ်ဉာဏ်၏2Gb y Internal Storage 16 GB MicroSD ကတ်များကို ၃၂ GB အထိဆန့်ကျင်စွာချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုယနေ့မှ စတင်၍ ယူရို ၁၂၅ ဖြင့်သာရောင်းချသည်။
၏ဒါကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု HOMTOM HT6၊ နှင့်အတူ terminal ကို 6250 mAh ဘက်ထရီ ယူရို ၁၂၅ သာသာလျှင်၊ ၂၀၁၅၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကကြိုတင်သိုလှောင်ထားသည့်ဆိပ်ကမ်းများမှတင်ပို့မှုစတင်လိမ့်မည်။
ဒီဆက်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း Doogee Phablet အသစ်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်မပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပြီး Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု၊ Bluetooth 4.0, GPS နှင့် aGPS များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းကမ်းလှမ်းသည်။ LTE ဆက်သွယ်မှု, ဥရောပGရိယာနှင့်သင်တန်းစပိန်တစ်လျှောက်လုံး 4G အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ terminal ရှိကင်မရာများနှင့်စက္ကူပေါ်တွင်ငွေပမာဏသည်စိတ်ဝင်စားစရာထက်ပိုပါသည် ၁၃ မီဂါပစ်ဇယ်နောက်ကင်မရာကို Sony မှပြုလုပ်သည် နှင့် ရှေ့5mpx ကောင်းသော selfies ယူဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပို။ ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြရန်ပျက်ကွက်နိုင်သောနောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ရန်အတွက် terminal တစ်ခုလက်ခံရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည် terminal ကိုအစာရှောင်ခြင်းတာဝန်ခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဤ HOMTOM HT6 ၏ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုသည် ၆၂၅၀ mAh ထက်မပိုသောအရာများဖြစ်သည်။ မိနစ် ၃၀ အတွင်း ၇၅% အထိအားသွင်းနိုင်သည်.
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ယူနစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် Androidsis မိတ်ဆွေများကိုသင်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်အလယ်အလတ်တန်းစား Android Terminal ကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားသောဘက်ထရီပါသည့်စက္ကူပေါ်တွင် Android ဆိပ်ကမ်းများကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်ထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၁၂၅ ယူရိုသာစျေးနှုန်းချိုသာပြီးလူသိများသည်။ ဤ HOMTOM HT6 အသစ်သည်ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ဘက်ထရီ » HOMTOM HT6 သည်ကြီးမားသည့် ၆၂၅၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် Doogee စမတ်ဖုန်းသစ်ကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲ ၃ ရက်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသော
ဖာနန်ဒို Jimenez ဟုသူကပြောသည်
ဆိုလိုသည်မှာ gsm, wcdma နှင့် lte တို့တွင်ကြိမ်နှုန်းများသည်ဘာလဲ။
ဖာနန်ဒို Jimenez ကိုပြန်ကြားပါ
စပိန်တွင်၎င်းသည် iberacces တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်
Google ကစက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်ဖြစ်ရပ်ကိုအတည်ပြုသည်